အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသား (၀ါကျနှင့် စာပိုဒ်) - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသား (၀ါကျနှင့် စာပိုဒ်)
Posted by Kyaw Win Tun on May 22, 2012 at 20:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၀ါကျအဆင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအသား ဆောင်းပါးတွင် “မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မဆို အရေးကို တသီးတသန့်လေ့ကျင့်မှသာလျင် ကျွမ်းကျင်၏။” ဆိုသော စာကြောင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဆီလျော်စေရန် “One cannot have good writing skill without any practice.” ဟု ရေးနိုင်ကြောင်း၊ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုလို့ မရနိုင်ဘဲ အင်္ဂလိပ်စာ ၀ါကျသဘောကို သိထားသင့်ကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါတွင် စာပိုဒ်၏ ဆိုလိုချက်နှင့် ဦးစား ပေး လိုမှုတို့ အပေါ်မူတည် ၍ ၀ါကျများကို “ကစား” သင့်ကြောင်း နှင့် စာပိုဒ် သဘောကိုပါ လေ့ကျင့် သင့် ကြောင်း ပြောပါမည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာတွင် ပေးထားသော ၀ါကျများကို အဓိပ္ပာယ်မပြောင်းစေဘဲ ပုံစံပြောင်းပြန် ရေးခိုင်း သော မေးခွန်းတခုပါသည်ကို သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ The house was built in 1900. ကို They အစပေး ထား ပြီး ပြန်ရေးခိုင်းတတ်ပါသည်။ They built the house in 1900. ကိုရေးရမည်ကိုလည်း သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မေးစရာ ရှိပါသည်။ ဘာကြောင့် ၀ါကျများကို ထိုသို့်ပြောင်းတတ်ရန်လိုပါသလဲ။ ဤမေးခွန်းကို ဥပမာစာပိုဒ်နှင့် ဖြေကြည့် ပါ မည်။
The house at the corner of my street looked very strange. It hadalarge compound. The compound had trees, plants and bushes, but they did not seem to be trimmed or taken care of. It hadagate door. The door was always locked. At any time- day or night, the house did not have any impression that it was alive with its dwellers. (People said the house was built in 1900. / People said they built the house in 1900.)
They were said to come to our village before 1900. First, they stayed outside the village, people said. Later they moved into the village. ……….
ပထမစာပိုဒ်၏ နောက်ဆုံးစာကြောင်းကို နှစ်မျိုးရေးပြထားပါသည်။ နှစ်ကြောင်းစလုံး အဓိပ္ပာယ် တူသည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် စာပိုဒ်တစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်စပ် ဖတ်ကြည့်လျင် တစ်ကြောင်းစီ၏ ဇောင်း ပေးထားသော အဓိပ္ပာယ် ကွဲသည်ကို သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ပထမစာကြောင်းတွင် အိမ် အကြောင်းကိုသာ ဆက်ပြောထားပါသည်။ ဒုတိယစာကြောင်း တွင် သူတို့ ဆို သော They ကို ပြောလိုကြောင်းသိသာပါသည်။ စာပိုဒ်၏ ဦးတည်ရာသည် ကတ္တား subject အသစ် တစ်ခုကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဒုတိယ စာပိုဒ်နှင့် ဆက်စပ်မိစေရန်မည်သည့် စာကြောင်းကို ရွေး သင့်ပါသလဲ။
မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေပါမည်။ ဘာကြောင့် ၀ါကျများကို ထိုသို့်ပြောင်းတတ်ရန်လိုပါသလဲ။ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်၏ ဆိုလိုရင်း သို့ မဟုတ် စာပိုဒ်များ၏ ဆိုလိုရင်းကို လိုက်၍ ၀ါကျများကို အမျိုးမျိုးရေးတတ်စေရန်ဟုပြောနိုင်မည်ထင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆိုလျင် ၀ါကျအမျိုးမျိုးကို တည်ဆောက်တတ်ရုံမျှဖြင့် စာမရေးနိုင်ဘဲစာပိုဒ်သဘောကိုပါနားလည်မှသာ စာရေးနိုင် မည်ကို သတိချပ်သင့်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျင်ဝါကျတစ်ကြောင်းစီ၏ အဓိပ္ပာယ်သည် စာပိုဒ်၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
စာပိုဒ်ဆိုသည်မှာ အဓိက ပြောလိုသည့် အချက်တစ်ချက်ကို အကျယ်ချဲ့ရေးထားသော စာကြောင်းများကို စုစည်း ထား သည့် စာကြောင်းအစုဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ အထက်ပါ အင်္ဂလိပ်စာ ပထမပိုဒ်တွင် အဓိကပြောလိုသည်မှာ အိမ်တစ် အိမ်၏ ထူးဆန်းပုံအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယစာပိုဒ်မှာ ထိုအိမ်ကို ဆောက်ခဲ့သော သူ များအကြောင်း ဟုပြော နိုင် ပါမည်။ မြန်မာစာ စာပိုဒ်များကိုလည်း စာတမ်းဆောင်းပါးစသည်တို့ တွင် ဤစာပိုဒ် သဘောနှင့်ပင်ရေးသည်ဟု ဆို နိုင်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံများကို လေ့ကျင့်နေသည့် တစ်ချိန်တည်း စာပိုဒ်များကို လေ့ကျင့် ရေးသားနေ သင့်ပါ သည်။ စာပိုဒ်ကိုလေ့ကျင့်နေသည့် အချိန်တွင် အစပိုင်း၌ ၀ါကျပုံစံနှင့် သဒ္ဒါမှန်မမှန်ကို သိပ်ဂရုစိုက်မနေသင့်ပါ။ ကိုယ် ပြော ချင်သည်ကို ဘာအချက်များဖြင့် ပြောမည်။ ထိုအချက်များကို ဘယ်လို စီစဉ်မည် တို့ ကို ဦးစားပေးသင့်ပါသည်။ ရေးဖို့ ရန် စိတ်ထဲတွင် စဉ်းစားရုံသာမက ချရေးပြီးလေ့ကျင့်သင့်ပါသည်။ တစ်ခါတည်းချရေးရုံဖြင့် ပြင်စရာမလိုသော စာပိုဒ် တစ်ခုကိုရမည်ဟုမထင်သင့်ပါ။ စာများများဖတ်ပြီး အရေးရှင်းသောစာပိုဒ်များကိုတွေ့ ပါက ဘယ်လို စာ ကြောင်းများကိုစီစဉ်ထားသည်ကိုလည်း လေ့လာသင့်ပါသည်။
စာပိုဒ်သုံးလေးခုပါသည့် စာတမ်းတခုကို မလေ့ကျင့်ခင် စာပိုဒ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုစတင် စဉ်းစားမလဲဆိုသည် ကို ဥပမာ တစ်ခုပေးလိုပါသည်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အချက်တစ်ခုကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ဆိုပါစို့Reading is good.ဘာအချက်တွေ နဲ့ ထပ်ရှင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အစီအစဉ်ကျကျမကျကျ ချရေးကြည့်ပါ။ သဒ္ဒါမှန်မှန် မှားမှား ဂရုမစိုက်ပါနှင့်။ It is good for knowledge. It is good for learning. It is good foraprofession. When we read books like science or history, we know aboutthings from the past or about the development. When we read books in English, we can learn the language. When we read some text books or journal articles, we can beabetter professional.
စိတ်ထဲပေါ်သမျှ ချရေးကြည့်သည့် အဆင့်ပဲရှိပါသည်။ ရေးခဲသမျှ အချက်များအနက် ဘယ်အကြောင်းအရာကို အကျယ်ထပ်ချဲ့ ရေးနိုင်သေးသလဲ၊ စဉ်းစားပါ။ ထို့ နောက် ဘယ်စာကြောင်းကို ရှေ့ ဘယ်စာကြောင်းကို နောက် ထားမလဲကို စဉ်းစားပါ။ ဘယ်စာကြောင်းကို ဖြုတ်ပစ်မလဲကိုလည်းစဉ်းစားပါ။ စာပိုဒ်သဘောကို နည်းနည်းတော့ တီးမိခေါက်မိလာပါလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် စာဖတ်ပါ။ စကားလုံးကြွယ်ဝအောင် လေ့ လာပါ။ စာပိုဒ်ကောင်း များကို အထူးပြုလေ့လာပါ။
ရှေ့ တစ်ပတ်တွင် စာပိုဒ်ဖွဲ့ စည်းရာတွင် အသုံးဝင်သော စကားလုံးများ အကြောင်းပြောပါမည်။
Permalink Reply by Htoo on May 24, 2012 at 11:16
ွှThank you very much!
Permalink Reply by Ko aye lwin on May 24, 2012 at 13:48
Permalink Reply by deep on May 24, 2012 at 17:39
bro i need to know. which english speaking class good for beginer level. expect USIS and British council.
sorry for my bad written usages.
Permalink Reply by 1p973us0st46a on May 24, 2012 at 18:27
Permalink Reply by shweyi on May 25, 2012 at 18:53
Thanksalot ko kyaw win tun,I am one of your online students.
Permalink Reply by Saw Sandar Maw on May 26, 2012 at 10:03
thanks for sharing lessons.
Permalink Reply by u myo aung on May 26, 2012 at 10:29
Very passionate and inspiring for learners.
Permalink Reply by myomyothinn on May 26, 2012 at 15:52
Permalink Reply by MAR LAR MYINT on May 26, 2012 at 20:58
Permalink Reply by Maythi Soelwin on May 28, 2012 at 15:21
Permalink Reply by Ratan Biswas on May 28, 2012 at 19:43
Permalink Reply by Zaw Win on May 29, 2012 at 9:03
Thanksalot of your sharing.
That is very precious for us.